Wonke umfazi okhulelweyo kufuneka azikhathalele aze azigcine ebonakalayo. Ezinye iindlela ezilula zinokukunceda ukunqoba izifo ezincinane xa ukhulelwa. Ngokumalunga nokutshintshwa kwe-hormone kweli xesha, abafazi bavakalelwa kukuba banokukhathala, ubunzima buninzi banda. Konke oku kunikeza ininzi yokuphazamiseka, kodwa oku kufuneka kulungiswe. Kwimiba emininzi isisombululo seengxaki zakho siya kuncedwa ngeempahla ezifanelekileyo kunye nezonyango ezikhethekileyo, kwaye ungalibali ukunyamekela umzimba wakho. Ngoko, "ukunakekela isikhumba esomileyo somzimba ngexesha lokukhulelwa" - umxholo wendaba yethu yanamhlanje.
Ngexesha lokukhulelwa, iinwele ziba nzima kakhulu kwaye zihle. Izinwele eziqhekekileyo nezomileyo ziba ngcono, ukulahleka kwazo kuhla, ngenxa yento eyenziwa ngama-hormone eyimfihlo-estrogens. Ngokuphathelele iinwele ezinamafutha, zinokuba zibi kakhulu, ngoko kufuneka zihlanjwe nge-shampoo encinci kwaye akufanele zomiswe ngomisi osikiweyo. Emva kokuhlamba nge-shampoo, kucetyiswa ukuba usebenzise ukhilimu ukubuyisela i-capillaries. Akukho cetyiswa ngexesha lokukhulelwa ukuya kumbala kunye neenwele ze-discolor ngendlela eya kwenzeka ngayo. Ukuba ufuna ukutshintsha umfanekiso wakho mzuzwana, sebenzisa iipaliti zemifino.
Ukuba kwisithuba sokugqibela emva kokubonakala kwakho ubonakala ulahlekelwa ubunwele obuninzi, ke uye kwikhosi encinane ye-cystine kunye namavithamini. Ukuze kukhawuleze ukukhula kweenwele kwiinyanga ezimbini okanye ezintathu, thatha ulwandle ityuwa.
Kwakhona ngexesha lokukhulelwa, imeko yepiyile iyathuthuka, ukukhula kwabo kukhawuleza kwaye kuyomeleza. Ukuba usebenzisa i-varnish ngaphambi kokukhulelwa, qhubeka uyenza.
Ubuso besikhumba buba mncinci kwaye bubala kwaye ngoko bubonakala buhle kakhulu. Umbala wobuso bakho buphucula ukulahlwa kotywala kunye nocuba, ukuphumla, kunye nokutya okufanelekileyo. Kodwa ngelanga lingaba ngenye indlela, ukukhusela oku, umntu akufanele ahlale engavumelekanga, umntu makanyamekele umzimba wakhe aze athekele ezi nkxwaleko ezincinci. Ungasebenzisi i-lotion kwi-alcohol, ungasebenzisi i-creams ebeka iifowuni zakho, vumela isikhumba sakho siphefumle ngangokunokwenzeka. Kufuneka ubeke ioli ye-almond kunye nekhilimu kunye ne-elastin, ukunyakaza kwamanzi, ukusuka kwintonga emacaleni nasemacaleni, yiphose.
Ngomvakalelo obunzima emilenzeni, iindidi eziqhelekileyo zetyhula ukusuka kwicala langaphakathi ukuya kwingaphandle, zihlambulule umlenze. Ungasebenzisa ukhilimu oqukethe i-elastin okanye ioli ye-almond. Kodwa akukho mfuneko yokuba nethemba ngokukhethekileyo ukuba liyakunceda ukuba ususe amacembe, nokuba ngaba kunceda ukugcina u-elasticity yolusu.
Ngokuphathelele izimonyo, unokwenza nantoni na oyithandayo. Into ephambili kukuba uvakalelwa njengebuhle. Ukususa iziqhumiso ebusweni, sebenzisa ubisi olungondliyo obusondezayo obusondayo. Akukho imfuneko yokusebenzisa iimveliso ezinobunxila kunye nezithandekayo njengokuba, ngexesha lokukhulelwa, ukunyuka kokunyuka kwamanzi kukunyuka.
Mhlawumbi ukubonakala kwamabala obomvu ngesimo esifana ne-asterisk, oku kufuthi kubakho phakathi kwenyanga yesibini nesesihlanu, kodwa ungakhathazeki, kuba zihlala zinyamalale emva kweenyanga ezintathu emva kokuzalwa.
Ama-Mugs, afumane kufuphi neengono kunye namacwe, obumnyama, umbala obomvu oqhelekileyo uvame ukubonakala kwisisu. Akuyimfuneko ukuphakamisa ukwesaba kwangaphambili, konke oku kuya kuba yinto eqhelekileyo emva kokunyamalala kweemodemoni zokukhulelwa, ezimbini, ezintathu emva kokuzalwa. Emva kokudlala ezemidlalo, oko kukuzilolonga izidumbu zesisu, umgca kuyo kuya kuba yicala, ulusu luya kulungiswa kwakhona kwaye lube lukhulu, kodwa oku kuthatha ixesha.
Ukuba unemijelo emhlophe kwaye usaphila emva kokuzalwa, zama ukusebenzisa i-ukhilimu kwizikratshi, ukondla kunye nokunondla isikhumba. Ukuthintela ngokupheleleyo ukubonakala kwamacwecwe emagqabini, isisu, isifuba kunye nesisu, njengoko ukubonakala kwezi zibophelelo kungekhona nje ngokunyuka kwesisindo, kodwa kunye ne-elasticity ephosakeleyo yesikhumba, ezuze ilifa.
Ukuba awunxibe i-bra, ke ngoko ngexesha lokukhulelwa kulungele ukwenza njengoko ngaphantsi kwempembelelo ye-hormone ukukhutshwa kwebele. Musa ukulibala ukuba ulusu lwesifuba lusetshatsheni kwaye lusengozini. Ukugqoka ibhondi ngexesha lokukhulelwa kuyimfuneko ukwenzela ukuba isisindo sesifuba asiluleli ngaphezu kokuyimfuneko. Mfuneko nje ukuqinisa itoni yesikhumba esesibhobho. Emva kokukhulelwa, unako ukugcina isifuba esihle, nokuba ulahlekelwa yimiyalezo kunye nokuma kwayo, kodwa uya kuthenga ukuthenga ibrasi kunye neekhalikhi ezinkulu.
Kufuneka ufumane i-pantyhose eqinile xa unesifiso semilanjeni ye-varicose.
Ngoku uyazi indlela yokunyamekela ulusu olomileyo lomzimba ngexesha lokukhulelwa.
I-paraffinotherapy ebusweni nasezintwini zesikhumba ekhaya
Kuthetha ukuba kwandisa ithoni yesikhumba
Ukusetyenziswa kolwandle ityuwa ekulwa ne-cellulite
Igumbi labantwana kwizindlela zasolwandle
Ngokugqithiseleyo kunempumelelo. Indlela yokuphucula ukusebenza?
Izitenxo zokusila: Ukuzivocavoca